फेसएप’ प्रयोग गर्नेहरु सावधान ! यसकारण छ खतरनाक – Anurag Post
Home / अनुराग पोष्ट / फेसएप’ प्रयोग गर्नेहरु सावधान ! यसकारण छ खतरनाक
फेसएप’ प्रयोग गर्नेहरु सावधान ! यसकारण छ खतरनाक
Anurag Post July 20, 2019	अनुराग पोष्ट Leaveacomment 297 Views
अहिले सोसल मिडियामा एउटा एपको प्रयोग गरी आफुलाई बुढो देखाउने होडबाजी नै चलिरहेको छ । विश्वभर नै फेस एपले तहल्का मच्चाइरहेको छ ।
सोसल मिडियामा फेसएपका तस्वीर अन्धाधुन्ध पोष्ट भैरहेका छन् । यो एपले कुनैपनि व्यक्तिको तस्वीरलाई कृत्रिम तरिकाले बुढो मानिसको अनुहारको रुपमा बदलिदिन्छ ।
जब तपाइँ आफ्नो फोटोलाई बुढो बनाउनका लागि यो एप प्रयोग गर्नुहुन्छ तब तपाइँको सोसल मिडियाको जानकारी फेसएपको सर्भर सम्म पुग्दछ ।
फेसएपले प्रयोगकर्ताका तस्वीर छनोट गरी अपलोड गर्दछ । त्यसपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी उक्त फोटोको स्वरुपमा परिवर्तन गरिन्छ । त्यसमा सर्भरको प्रयोग हुन्छ र एपका माध्यमबाट नै प्रयोगकर्ताले फोटो खिच्नु पर्दछ ।
यो एप यति खतरनाक छ कि तपाइँले यो एप प्रयोग गरिरहेको मोबाइल फोनबाट तपाइँका विभिन्न सूचना प्राप्त गर्दछ र पछि ती सूचनालाई विज्ञापनमा प्रयोग गर्न सक्छ ।
यो एपले प्रयोगकर्ताहरुको आनीबानी तथा रुचीहरु बुझ्ने कोसिस गरिरहेको हुनसक्छ ता कि विज्ञापनमा प्रयोग गर्न सकियोस् । यसलाई मार्केटिङको हतियारका रुपमा पनि बुझिएको छ ।
फेसएपलाई लिएर अमेरिकी सिनेटमा पनि आवाज उठेको छ र सिनेटरहरुले यो एपमाथि छानविन गर्न माग गरेका छन् ।
सिनेटमा अल्पसंख्यक नेता चक शुमरले फेसएपमाथि छानविन गर्न माग गरेका हुन् । ट्वीटरमा पोष्ट गरिएको एक पत्रमा शुमरले लेखेका छन्, ‘यो निकै चिन्ताजनक छ । अमेरिकी नागरिकको निजी डाटा विदेशी शक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेका छन् ।’
तर फेसएपले भने यस्ता आरोप अस्विकार गरेको छ । रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गस्थित वायरलेस ल्याब कम्पनीले उक्त एप विकास गरेको हो ।
विज्ञहरुका अनुसार यो एपले साइबर सुरक्षामा कत्तिको खतरा पैदा गरेको छ भन्ने त अझै खुलेको छैन, तर यो एप प्रयोग नगर्नु नै फाइदाजनक हुन्छ ।
तथापि अहिले विश्वमा ८ करोड भन्दा धेरैले यो एप प्रयोग गरिसकेका छन् ।
Previous हरेक नेपालीको रोग ग्यास्ट्रिकमा ध्यान दिनुपर्ने ६ कुरा -डा. सन्दीपराज कुँवर
Next यी हुन् नर्सलाई सबैभन्दा बढी तलब दिने १० देश
वीरगञ्ज, १७ साउन । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृ’त्यु भएकाको शव व्यवस्थापनका लागि पुगेको प्रहरी टोलीमाथि …